Shiinaha Lagu Kirey Qabyo Dhismeyaal Iskutallaab ah oo Loogu Talo Galay Jiilka Korantada, HVAC-baaxad weyn iyo Soo-saaraha Xarumaha Warshadaha | Yubing
Waxtarka waxtarka badan ...
Dabaqyo Qabyo ah oo Iskutallaab ah oo lagu Wareejinayo Dhismayaal loogu talagalay Jiilka Korantada, HVAC ballaaran iyo Xarumaha Warshadaha
Tiirarkan taxanaha ah ee qaboojiyaha ayaa sababa qabyo, munaarado iskutallaab qulqulaya oo loo qaabeeyey iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha ee ku saabsan waxqabadka, qaabdhismeedka, socodka, isticmaalka korontada, madaxa bamka iyo qiimaha bartilmaameedka.
Waxay si gaar ah ugu habboon yihiin codsiyada warshadaha culus ee dhirta tamarta, dhirta bacriminta, iskudhafyada kiimikada iyo saliidaha batroolka iyo in badan oo ka mid ah munaarado cusub ayaa laga dhisay muraayada maaddada dab damiska ah sababta oo ah xooggooda iyo guryaha u adkeysiga dabka / daxalka.
Waa nooc aad u tiro badan marka la fiiriyo codsiga kala duwan ee qaabeynta. Taawarka khadka toosan ku yaal waa qaabka caadiga ah ee sababaha waxtarka leh, laakiin isbarbar socda khadka, gadaal iyo gadaal, iyo qaabeynta qaabeynta sidoo kale waa xulashooyin marka qorshaha goobtu u baahan yahay qaab ka duwan.
Qaabeynta wareega waxay noqon kartaa xalka saxda ah ee goobta xaddidan.
U dhisida munaaradda qaab toosan waxay siineysaa qorshe ugu yaraan isticmaalka tamarta, oo ay kujirto hoos u dhaca isticmaalka tamarta taageereyaasha iyo madaxa bamgareynta ugu hooseeya. Xisaabtanka gelitaanka hawada ee waxtarka leh, munaaradda dhererkeeda iyo qiimaheeda waa la yareeyay.
Dib-u-qaabeynta munaarad-gadaal-gadaal ah ayaa ku habboonaan karta xaddidaadda goobta marka ay u suuroobi weydo qaabeynta qadka. Marka la barbardhigo nidaamka toosan, tamarta mashiinka mashiinka iyo madaxa mashiinka ayaa labaduba kordhay taas oo horseedi doonta qiimo sare laakiin waxtarka kuleylka hooseeya.
Isku-xidhka khadka toosan
Haddii aysan suurtagal ahayn in munaaradaha lagu dhejiyo hal xariiq, waa caadi in lakala qaybiyo oo loo kala habeeyo munaaradaha laba qaybood ama kabadan oo loo qaabeeyey qaab isku mid ah iyadoo la tixgelinayo qodobbada soo socda:
Waxay si weyn hoos ugu dhigi doontaa mashiinka mashiinka tuuraya iyadoo loo kala qaybinayo aagga hawo-mareenka inta udhaxeysa labada weji ee wejiga.
Waxay si weyn u yareyn kartaa kharashka munaaradda ee ay suurta galisay dhererka munaaradda oo hoos u dhacday isla markaana heshay waxtarka.
Waxay yareysaa tamarta taageereyaasha iyadoo dib loogu soo celinayo waxtarkii lumay iyadoo la adeegsanayo laba hawo oo hawo ah.
Waxay yaraynaysaa dhererka la rakibay iyadoo la adeegsanayo aagga u dhexeeya munaaradaha godadka mashiinnada, tuubbada, iyo qodobbada marin u helka.
Awoodda kuleylka ee la isku halleyn karo iyadoo la jarayo hawo waxay soo jiidanaysaa biyaha dhacaya qeybtii.
Dayactirka ugu fudud iyo hawlgalka oo la siinayo xarunta iyadoo la siinayo munaarado si fudud u go'doonsan
Hore: ICE Nidaamka Jilcadaha Biyaha Warshadaha ee Qaboojinta Tower Source Water
Xiga: Nooca Dhalada Wareegsan-Towers Qaboojinta
munaaradda qaboojinta tamarta-keydinta
beerta taagay munaaraddii qaboojinta warshadaha
munaaraddii qaboojinta waxtarka sare
munaarad qaboojin qabyo ah
munaaraddii qaboojinta warshadaha
munaaraddii qaboojinta warshadaha ee koronto dhalinta
munaaradda qaboojinta biyo-qaboojinta
Wareegyada Wareejinta Wareegga Wareegga / Ev ...
Wareegyada Wareegsan ee Wareegga Wareegga / Evap ...
Qalcado Qaboojiye Qabyo ah oo Qabsad Leh oo leh ...
Nooca Dhalada Wareegsan-Towers Qaboojinta